Iingoma ezingama-50 + malunga nabantwana bakowenu: Umculo obetha uMarko - Okunye
Iingoma ezingama-50 + malunga nabantwana bakowenu: Umculo obetha uMarko
Abantakwenu noodadewenu ngabahlobo bakho bokuqala kunye nabahlobo bakho banaphakade. Ezi ngoma zimalunga nabantakwenu abangasoloko bevana okanye bengaboni ngasonye, ​​kodwa xa kutyhalwa kuza kutyhalwa, baya kuhlala benomqolo omnye nomnye.
Iingoma Malunga Nabazalwana
Umntakwenu wayeyintlungu xa wawusemncinci, kodwa ngoku ungumntu omjonga kwaye umhloniphe. Mkhumbuze ngendawo anayo ebomini bakho ngengoma.
Imibongo ehlekisayo ngokuGuqula ama-50
Uluhlu lweeLayibhile zokuRekhoda
Uyazi njani iNja eFayo kumaXesha okuGqibela
'Abazalwana begazi' -uLuke Bryan
Iingoma zelizwe zinendlela yokutsala kwiintliziyo, kwaye le yenye yezo ngoma. UBryan ulahlekelwe ngabantakwabo bobabini, wongeza umaleko owongezelelekileyo wokuba 'babambe abo basondele kuwe ngokuqinileyo ngangoko unako,' kwingoma.
'Akasindi, Ungumzalwana Wam' - IiHollies
Le ngoma iyangqubana nendlela umntakwenu aya kuyenza ngayo nantoni na malunga nomntakwabo. Ubunzima bakhe abusoze bube nzima kakhulu, umthwalo awusoze ube mkhulu kakhulu ukuba ungabekwa.
'Kwenzeka ntoni Mzalwana' -UMarvin Gaye
Umbhali wengoma kunye nemvumi, ongasekhoyo uMarvin Gaye, wabhala le klasiki eyenzela umntakwabo owabuyela eMelika eyahlukileyo kakhulu kwiMfazwe yaseVietnam.
'Mzalwana' - Kodaline
Le ngoma ye-indie-pop ayaziwa kangako ngabantu, kodwa ngumvuzo omkhulu kubantakwabo. Uhlonipha imbophelelo yobuzalwana engenakuqhawulwa.
'ABC' -UJackson ezintlanu
IABC ayithethi ngobuhlobo bobuzalwana, kodwa iculwa lelona qela likhulu labazalwana ixesha lonke. Nantoni na eyenziwa nguJackson ezintlanu kufuneka ibe yingxaki yokuhlangana.
igama into oyicingayo xa ucinga ngespain
Iingoma ze / Malunga noodade
Udade ungumhlobo osenyongweni wobomi, umntu oza kwabelana ngeemfihlo ezinzulu kunye neehempe ozithandayo. Ezi ngoma zichaza ubudlelwane bakho koodade kwi tee.
'Dade' -UDave Matthews Band
Usisi ibeka yonke into ngendlela eyiyo. Igxile kumzalwana okwincopho yokuphumelela elangazelela iintsuku ezilula kunye nothando kunye nentuthuzelo kadadewabo.
'Yiza Ngemini Enethayo' -Wynonna Judd
UJudd unodade omncinci odumileyo, umdlali weqonga uAshley Judd. Imigca embalwa yale ngoma inikezelwe ku-Wynonna's sis othandekayo.
'Dade, Oh Dade' -Roseanne Cash
Okuninzi okufundwa ngabantu kuvela koodade wabo abadala. UCash uveza le ntetho kwingoma yelizwe lakhe.
'Udade kuMzalwana' -Rob Finlay
Akayi kuhlala engudade wosana. Ingoma ihlangana nabo bonke abazalwana abakhulu ngequbuliso kufuneka babone amakhosazana abo anomsila wehagu njengabafazi.
'Intombazana esemlilweni' -Alicia Keys
Ukhanyisa umhlaba kwaye uthatha yonke into ayichukumisayo ngesiphango. Awungekhe ube nebhongo ngo-sis wakho, kwaye le ngoma iyithetha yonke into.
'Udade Omdala' - UCarly Simon
Umculi uCarly Simon uyamthanda ngokucacileyo usisi wakhe omkhulu. Le ngoma yabhalwa kwaye yenziwa njengomrhumo ku-sis Lucy omdala ngaphambi kokuba afike.
'Umoya ngaphantsi kwamaphiko am' -uBette Midler
Irhafu entle kumntu ojonge kuye ubomi bakho bonke. Udade wakho ngumhlobo wakho osenyongweni kunye neqhawe lakho.
'Ndiza kukukhathalela' - UDixie Chick
Ekuqaleni yenziwe nguKenny Rogers, le ngoma ikhumbuza nawuphi na udade kufutshane nakude ukuba baya kuhlala benomntu obathandayo.
'Udade omncinci' -uJewel
Ukujonga umzabalazo womntakwenu ukuba likhoboka lesiyobisi. Le ngoma ngokuqinisekileyo ibonisa ukuba abantu baziva benxunguphele xa befuna nje ukuba udade wabo abe sempilweni.
Iingoma Malunga Nabantakwenu Abapasileyo
Intlungu oba nayo xa uswelekelwa ngumzalwana okanye udade inzima ngendlela engathethekiyo. Akukho nto inokuphakamisa loo ntlungu, kodwa iingoma ezinje ngezi zivakala ngathi zangana njeamaxesha osizi.
'Phezu kwakho' - UMiranda Lambert
U-Lambert kunye nomyeni wakhe wangaphambili uBlake Shelton babhale le ngoma yomntakwabo ka-Shelton, owasweleka kabuhlungu ngenxa yengozi yemoto.
'Ubani Na Namhlanje' - UKenny Chesney
Ingoma emnandi malunga nokuzonwabisa kunye nelahleko. Abo banabantakwabo abathathwe ngokukhawuleza bayazi ukuba bayazibuza ukuba ngubani umzalwana wabo okanye udade wabo ukuba ngubani namhlanje ukuba bebehlala.
'Siyakubonana kwakhona' -Wiz Khalifa kunye noCharlie Puth
Ingoma ivakalise umnqweno onamandla wokubona abo babathandayo abadlulayo.
'Uthando lwethu' - Bee Gees
I-Bee Gee hit ikwabizwa ngokuba yiNgoma kaAndy, ebhalwe nguBarry Gibbs yomntakwabo, naye elilungu leqela leBee Gee. (Ngokuxhalabisayo uAndy uthathe ubomi bakhe, kwaye emva konyaka ibhendi yaqala ukuyenza ingoma.) Nabani na ophulaphuleyo unokuva uthando lukaBarry ngomhlobo wakhe osenyongweni emhlabeni, umntakwabo.
'Ndiqhuba iTrakhi yakho' - U-Lee Brice
Ingcinga nje yokuphulukana nomntakwenu phantse ukuba ayinakuthwala. Eli lizwe libethileyo liphulukene nomzalwana emfazweni, kwaye nabo bangaphulukananga nomntakwabo baya kufuna ukubiza abantakwabo babazise ukuba babathanda kangakanani.
'Uthuli Emoyeni' -Kansas
Le klasiki iyathuthuzela nawuphi na umphefumlo olahlekileyo omnye umntakwabo.
'Ukuphela kumnyama' - Metallica
Amagama anokulingana neemeko ezininzi, kubandakanya umxholo wokulahlekelwa yinto ekhethekileyo kuwe, njengomntakwenu.
'Ukuba Izulu Lalifuna IHero' -UJoe Dee Messina
Ukuba ubhuti wakho omkhulu ibingoyena mntu umthandayo kunye neqhawe lakho, uya kudinga iibhokisi ezininzi zethishu ukuze udlule kule ngoma.
'Sela ibhiya' -uLuke Bryan
Ingoma yabhalwa ngomnye umntu, kodwa uBryan wayirekhodisha ukuphawula ukudlula komntu osondeleyo kuye.
Iingoma zabo bahlukaniswe ngumgama
Ukukhula kwakho awuzange wohlukane, kodwa ebudaleni, uhambe ngeendlela zakho ezahlukileyo. Unokuhlulwa ngumgama, kodwa ezintliziyweni zakho, awusoze waqeleleka kude.
'I-Tha Crossroads' -Amathambo ii-Thugs-N-Harmony
Amagama anomceli mngeni omncinci wokucacisa njengoko aba bantu bezona zithethi zikhawulezayo kumdlalo we-rap, kodwa kunzima ukuphoswa ngumyalezo. Iqela labhalela i-rap yomhlobo oswelekileyo, u-Easy E. Wayefana nomzalwana kwiqela le-rap, kwaye kuyacaca ukuba baya kuhlala bemkhumbula kwaye bemlilele.
'Udade wethu' -Reba McEntire
UReba ushiya i-voicemail ethwele uthando kwifowuni kadadewabo, ekhumbula malunga neentsuku ezindala ezimnandi kwaye anqwenela ukumanyana kwakhona.
'Hee, Mzalwana' - Avicii
Ingoma, icwecwe kwi-albhamu yomculi ka-2013 Kuyinyani , malunga nomzalwana okude kude nabantakwabo kodwa uhlala ebagcina besondele entliziyweni yakhe.
'UMarta' -Rufus Wainwright
Le ballad inzima kwiimvakalelo. Nabani na onomntakwabo ohlukanisiweyo kwaye ufuna ukuba babuye ekhaya baya kuhambelana nomculo.
'Ibhola ekhatywayo yodaka' -UJack Johnson
UJohnson uyincutshe ekuphumezeni imiphefumlo, ke le ngoma yabazalwana abashiya ikholeji ngeentsuku ezimbini, uziva ngathi yimizuzu emi-3 yonyango kuye nabani na olahlekileyo umntakwabo.
'Isibhakabhaka esi-Orenji' -Alexi Murdoch
Inkwenkwe iyalishiya ikhaya iyokuzifumana kodwa igqibela ngokuthetha nabantakwabo phantsi kwesibhakabhaka esi-orenji.
Iingoma ezimnandi zokuDlala xa sidibene kwakhona
Awunakuchitha ixesha elininzi kunye nomntakwenu, kodwa xa nidibana, lixesha lokubhiyoza.
'Amakhwenkwe abuyele edolophini' - Thin Lizzy
Xa abazalwana behlangana, uyazi ukuba izakuba yindumasi engapheliyo!
'Kulungile' - UMary J. Blige
Xa wena nabantakwenu nindawonye, ​​umhlaba unokuwa ngoba ngalo mzuzu wexesha, yonke into ilungile.
'Oyena Mhlobo ubalaseleyo' -U-Aaliyah oBonisa uMissy Elliott
Abahlobo baya kuza badlule, kodwa udade wenu ngumhlobo wakho osenyongweni ngonaphakade.
'Amantombazana afuna nje ukonwaba' -uCyndi Lauper
Xa oodade behlanganisene, bekani isali! Ngokuqinisekileyo iya kuba lixesha lasendle, elimnandi.
'SiyiNtsapho' -UDade Sledge
Ewe unjalo. Asinguye wonke umntu ofumana konke, kodwa abantakwenu ngokuqinisekileyo bayakwenza!
'Abazalwana kunye noodade' - Coldplay
Xa wena nabantakwenu nidibana, niyinto enifanele niyenze. Lumka, hlabathi!
'Usapho' -uRodney Atkins
Ukudibana kwakhona kosaphonabantakwenu baya kuhlala begcwele amahla ndinyuka, ukuhleka, uthando, kunye nenqwaba yejabs engenabungozi. Abazalwana kunye noodade bafumana yonke into yokugqibela, kodwa njengoko isitsho kule ngoma, 'Uyayithanda'! '
'Ngubani Othi Awunakubuyela Ekhaya' - Bon Jovi
Wena nabantakwenu nilibhanti lokubhadula, kodwa kuzo zonke iindawo okhe waya kuzo kunye nezinto ozibonileyo, ikhaya kulapho likho. Ungasoloko ugoduka.
'Le yeyamantombazana' -Martina McBride
Ngokuphela ngorhatya, wena kunye noodadewenu niza kube niyibethela phezulu le ngoma phezulu emiphungeni yakho. Amandla amantombazana!
'Umnqweno wam' -iRascal Flatts
Kuba ngubani ongalinqweneliyo umhlaba ngomntakwabo okanye udade wabo?
Iingoma zokuphakamisa umntakwenu phezulu
Iingoma zinokukhuthaza kwaye zincedise ukuhambisa umyalezo weqhayiya, uthando kunye nenkuthazo yabantakwenu abafumana indlela
'Ndiza kuma ecaleni kwakho' - Abazenzisi
Xa kungekho mntu ubonakala ekhona, umntakwenu uya kuma ngakuwe.
'Uya kubakho' - Ukholo Hill
Nokuba ungaphuma phi na umzalwana okanye udade, okanye leliphi ibakala elibhiyozelwayo, uyakubakhona, ubavuyele.
'Iintyatyambo zasendle' - Tom Petty
Hambani nina, bazalwana noodade.
Kwintliziyo yakho, yonke into oyifunayo kumntakwenu okanye udadewenu kukuba bafumane eyabo intwana yolonwabo emhlabeni.
'Xa Sikhula' - UDiana Ross
Ingoma ithetha ngamathemba namaphupha e-duo yakowenu enezicwangciso ezinkulu, kodwa ekugqibeleni yonke into abafuna ukuyenza kukuhlala kufutshane omnye komnye ngonaphakade. Wwwwww. Iinjongo zakowenu.
'Ndifunde Kuwe' -Miley Cyrus
UKoreshi uthethe ngokuphandle kwaye uhlala ethanda ngosapho kunye nabantakwabo. Ividiyo yale ngoma inoyise kaKoreshi, kodwa amazwi abekwa ngokulula kuthando kunye nothando lomzalwana olujonge phezulu kuye.
'Mzalwana wam' - uSuzanne Vega
UVega ucula ngokwembono kadade osele ekhulile ethetha nomntakwabo omncinci, onxaxhileyo, emxelela ukuba abe yindoda kwaye abe nguloo mntu ebehlala ekufanele ukuba abekho.
Kwenzeka ntoni ukuba ubhaqwa uqhuba ixesha olibekelweyo
'Ungumhlobo wam osenyongweni' - uKumkanikazi
Ngomdlalo we-wrestling kunye neekati, ngabona bahlobo bakho basenyongweni.
'Mzalwana noDade Ingoma' - USteve noAnnie Chapman
Ingoma yomrhumo kuye nakowuphi na umntakwabo obathandayo abantakwabo okanye udade wabo.
'Ndoyame ngam' - uBill uyabuna
Bazise ukuba nokuba ubomi buphuma phi kubo, uya kuhlala ulapho.
'Bala kum' -Bruno Mars
Xa kungekho mntu ubonakalisayo, uyakubakhona.
'Kuba Undithandile' -U-Celine Dion
Uyile nto uyiyo ngenxa yothando nenkxaso yabo.
'Unomhlobo' -UJames Taylor
Xa bengenayo enye into emhlabeni, banomhlobo kuwe, umntakwabo.
Iingoma zomntakwabo Zithetha Konke
Xa ungafumani magama afanelekileyo okuxelela umntakwenu ukuba uziva njani ngabo, zama ukuwatsho ngeengoma. Ngamanye amaxesha amazwi anokuchukumisa indawo ekhethekileyo entliziyweni engenakufikelelwa ngenye indlela.
Ukuzivocavoca Izixhobo Kunye Neapparel Spa Vacation Destinations Abacebisi Kunye Size Women's Lingerie Umtshato Izimemo
yi leo uphawu lomlilo
indlela yokwenza isikhwama sephepha
izizathu zokungayi emngcwabeni
uvelwano enkosi kumanqaku abo usebenza nabo
intsingiselo eyinyani yombongo wekrisimesi
indlela entle yokubuza intombazana ukuba ibeyintombi yakho